नेपाल सरकारको नियमन नहुँदा फेसबुकको अरबौ राजस्व यसरि बाहिरिन्छ ! « Postpati – News For All
नेपाल सरकारको नियमन नहुँदा फेसबुकको अरबौ राजस्व यसरि बाहिरिन्छ !
विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका नाममा फेसबुक युट्युब गुगुल इन्स्टाग्राम जस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट बार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अाम्दानि गरिरहेका छन।
नेपाल सरकारले यसकाे नियमन गर्न नसक्दा कराेडाै राजस्व गुमाइरहेकाे छ। सबैभन्दा ठुलाे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अाफ्ना उत्पादन हरु फेसबुक ह्वाट्सएप इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जरबाट सन २०१७ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट प्रतिप्रयाेगकर्ता ८ दशमलव ९२ डलर अाम्दानी गरेकाे थियाे।
याे बर्ष ९ दशमलव ९१ डलर अाम्दानि गर्ने अनुमान छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रकाे अाैसत मान्दा १ करोड १० लाख नेपाली प्रयाेगकर्ताबाट फेसबुकले यश बर्ष १२ अर्ब ७५ कराेड रुपैयाँ लग्नेछ। यसरी प्रतिप्रयाेगकर्ता ११ सय ५९ रुपैया फेसबुले नेपालबाट लग्नेछ ।
अघिल्लो बर्ष फेसबुकले विश्वभरबाट प्रतिप्रयाेगकर्ता २० दशमलव २१ डलर अाम्दानी गरेकाे थियाे। २०१८ मा विश्वभरबाट फेसबुककाे अाम्दानी प्रतिव्यक्ति अाैसतमा २३ दशमलव ४५ डलर पुग्ने अनुमान छ। यसरी फेसबुकले यसबर्ष ६० खर्ब ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अाम्दानी गर्नेछ । याे नेपालकाे कुल बजेटकाे ४ गुणा बढि हाे ।
नेपालकाे बार्षिक कुल बजेट १५ खर्ब रहेकाे छ। फेसबुक जस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल युट्युब गुगुल टि्वटरले नेपालबाट करोडौं अाम्दानी गरिरहेका छन।